Digital Trail Khamera, okuzingela khamera, Hunting Trail Camera - Kinghat
Ikhamera yomzila wokuzingela osisiseko
3G ukuzingela camera
4G ukuzingela camera
Shenzhen Kinghat Technology Co., Ltd. eyasekwa ngo-2009, ibekwe Bao, 'i Shenzhen, i umenzi professional benza uphando, uphuhliso, imveliso, intengiso kunye nenkonzo Consumer iimveliso zombane kunye nokuhlolwa Smart.
ngokukhanya ngephanyazo yonke
Yintoni ikhamera yokuzingela: ikhamera esebenzayo enikezelwe ebaleni
Ukuthetha ngeekhamera zokuzingela, mhlawumbi abantu abaninzi abayivanga loo nto. Uninzi lwezixhobo zedijithali zicinga ukuba iikhamera zeekhamera zedijithali kunye nee-SLRs. Kufuphi nasekhaya, ukuzingela ikhamera, njengoko igama lisitsho, yikhamera ekhethekileyo eyilelwe ukuzingela endle. Kwimigangatho ye-layman, ukuba uyazi ukuba d ...
Umgangatho ophezulu wokuzenzekelayo we-LCD omkhulu obonisa izandla sodonga olusisigxina
I-16MP 4G 48 * 940nm i-LEDS 0.25s ibangela i-IP66 Akukho khamera yokukhanya yokuzingela ebusuku
©Kinghat Outdoor Products.All Rights Reserved. 粤ICP备2020123259号 Products Kufakwe , Sitemap , Mobile Site
12mp Infrared Led Wildlife Khamera , Trail Hunting Khamera , Waterproof Trail Camera, Animal Hunting Khamera , Trail Camera Infrar , okuzingela obushushu Vision yekhamera ,